Injongo yangoLwesihlanu: indlela abantwana ezikolweni baxineke ngayo sisasazi se-LGBTI: Martin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-13 Disemba 2019	• 17 Comments
Izolo ndifumene i-imeyile evela apho kubonakala ukuba abaphathi besikolo be-VMBO babiza abafundi bayo ukuba banxibe ezimfusa ngokomxholo 'wangoLwesihlanu omfusa'. Kwixa elidlulileyo besinosuku lwesilwanyana kuphela, utata notata womama, kodwa kule mihla sinosuku lwehlabathi nolunye lwamazwe liphela. Unosuku malunga nayo yonke into! Kungenxa yokuba ikakhulu kugxininiswa kwiilebheli. Ukuba siphinda sijongane nomatshini wokusasaza wemvula (i-LGBTI), icacile kumyalezo ongezantsi wokuba iVMBO ithumele i-Bouwens (Limburg) kubafundi bayo.
Funda ngendlela amabhunga abafundi enza ngayo imali ayichitha ekuchitheni uhlahlo-lwabiwo mali lwesikolo kumaphetshana e-LGBTI kunye nezixhobo zolwazi "Oku kulungiselelwe kunye neenkokeli zeqela kunye neqela lenkxaso". Ngubani okanye liphi elo qela lenkxaso?
Kucacile ukuba abantwana benziwa ngaphakathi ukuze baguqukele kwinkolelo ye-LGBTI. "I-Purple ngolwesihlanu lusuku apho abafundi kunye nabafundi abanxibe ibala elingwevu banokubonisa ubumbano babo nabantu abathandana besini esinye, i-bisexcript, i-lesbians kunye ne-transgender yabantu," ingxelo ithi. Umanyano? Ke yintoni umanyano lwakho? Yintoni 'ubumbano' nokuba kunjalo? Ngaba sithetha ngokuqina kwezopolitiko okanye kwezomthetho?
Umanyano kwezopolitiko: ulwazi ngokudibana kunye nokuzimisela ukuthwala iziphumo. (UVan Dale)
Umanyano ngokomthetho wekhontrakthi: ngokudibeneyo kunye nolunye uxanduva lwababolekisi okanye abanamatyala. Ngamnye kubo unokubanga ityala lonke okanye ubenetyala elipheleleyo.
Ngaba ubuntu bunembophelelo yamatyala kuluntu lwe-LGBTI? Ke ukuba uxela ubumbano lwakho ngokunxiba ezimfusa, uyatsho ukuba uzimisele ukuthwala iziphumo zoxanduva lwakho olityala? Kwaye luphi uxanduva lwamatyala? Ngaba kunjalo elixanduva lokuhlawulwa kwetyala? Okanye sithetha nje 'ngobumbano' ngengqondo yokuba 'sime emva kwakho'? Kodwa uxhasa ntoni? Ngaba "siyayixhasa ingcinga yokuba wonke umntu kufuneka afumane ilebhile kwaye iqela lakho kufuneka lize ngaphambili"? Kwaye ntoni malunga nomanyano kunye nomntu wesini esahlukileyo? Le leta H kwisishwankathelo ayimeli ubungqingili, kodwa ifanelwe ngabantu besini esinye.
Kulungile, kulungile, emva koko unxiba ezimfusa emva koko ubonakalisa ubumbano neqela? Uzinzo entweni? Kwaye uza kuthini xa unganxibi zuba? Ukuba uyandibuza, sinikela ubungqina bobuqhetseba bobutsha. Ukwahlukileyo kukonyuswe kumgangatho. Ewe unokuphikisana ukuba ukuba nesini, ubungqingili, ubungqingili okanye transgender ayiseyiyo into eyahlukileyo. Kulungile emva koko. Emva koko asisadingi ubumbano kunye nayo. Ukuba iqela liqala ukuza ngobuninzi, alisekho iqela elincinci. Kodwa ngaba siza kwenza okufanayo nangamaKristu, amaSilamsi, abamnyama, abamhlophe, amaTshayina, ama-Arabhu, amaSurinamese nazo zonke iilebhile esinokuzicinga? Uyenza njani into yokuba ucalucalulo? Oko kuqala ngokulebhelisha.
Kwincwadi yam ndicacisa indlela uthingo luphawu lwenkolo yehlabathi elitsha kunye urhulumente wehlabathi elitsha. Yayiluphawu lwamajoni omnyama (i-Greenpeace) kwaye ngoku iluphawu loluntu lwe-LGBTI. Umnyama wawungumqondiso wengqumbo kaThixo. Yayiluphawu olwabonakala esibhakabhakeni emva konogumbe omkhulu. Emva kwalomkhukula, uNowa wavunyelwa ukuba abeke uluntu olutsha kunye nokwakha umbuso wezilwanyana. Umnyama unjengoko wawungumqondiso wotshintsho olukhulu. Yiyo loo nto ndicacisa kwincwadi yam ukuba uluntu lulungiselelwe i-transgender-transhuman, ngeyona njongo iphambili yokugcwaliswa ngokupheleleyo kobukrelekrele bokwenza izinto (AI).
Amajoni omnyama asuka eGreenpeace aguqulwe aba manejala bokuguqula imvukelo. Umnyama ubonakala umela inkuthazo yendalo esingqongileyo, ukubandakanywa kunye nokukhululwa kwesini, kodwa eneneni luphawu lolawulo lwehlabathi elizimeleyo, njengoko kucacisiwe kwincwadi yam entsha.
Inyathelo lokuqala eliya kwi-transgender transhuman yenye Ulawulo lwetekhnoloji, ukubiza iinkampu zokufunda kwakhona yibone ngoku. Olu lawulo lwetekhnoloji lungafakwa ngokudibanisa ukutshabalalisa kwimozulu kunye nomthwalo we-CO2. Ukufezekiswa kwayo kunokugqitywa 'nge-intanethi yezinto', imali yedijithali (ukulandelela i-crypto) kunye nenkqubo yerhafu yehlabathi kwi-CO2. I-EU ilapho ngokusebenzisa uFrans Timmermans, ke, musa ukusula ulinde (njengoko kufanelekile iziko elingajongelwanga inkululeko) okwesibini ngokuqaliswa kwenkqubo enjalo. Ingathi yayisele isherifini ngaphambi kokuba u-Greta Thunberg angacinga nokucinga. Ezo rhafu ziya kuza nje kwaye ukuba kukho imfuneko, amazwe anyanzeliswa nje ukuba aqhubeke nazo. Ukuba iyimfuneko ngomkhosi wamajoni (jonga apha).
"Inxulumene nantoni na noluntu lwe-LGBTI?" Unokucinga ngoku? Ewe, silusuku lokunyanzela izimvo ezithile. Umnyama awudibanisi kuphela intshabalalo yendalo esingqongileyo kuluntu lwe-LGBTI, kodwa kunye nolawulo lwehlabathi oluzabalaza enyanzelisa izimvo. Ke sele kukho izandi zokuba ezi kampu ziphinda zifundiswe kufuneka zize (bona apha) kwaye ukuba ucofa kwikhonkco lelo nqaku, uya kufumanisa ukuba umthetho wase-Datshi ungabiza umntu ngokuthi 'yi-psychotic' ngokusekelwe koko kubizwa ngokuba 'kukukhohlisa'. Unobuqhetseba (okanye inkohliso) ukuba izimvo zakho ziphambuka kwinyaniso eyamkelweyo ngokubanzi.
Ke ngoko, ukuba i-EU ithi i-CO2 yirhafu kufuneka ingeniswe (kuba kungenjalo siya kujongana nentlekele yemozulu) olo luluvo olusemthethweni (oluchazwa 'njengeyona nto iyinyani'). Ukuba awukholelwa kolu luvo lwaseburhulumenteni, uya kuhlupheka ngenxa yokukhohlisa (izimvo eziphambuka 'kwinyani'). Oko kuthetha ngokuthe ngqo ukuba ngokoMthetho we-WvGZZ (umthetho onyanzelekileyo wokhathalelo lwempilo yengqondo) unokuthathwa yi-psycholance kunyango kwiklinikhi ye-GGZ (ke kwakhona ngemfundo), kuba ngokwenkcazo wena ungumntu wengqondo.
Funda ngaphakathi olu xwebhu lwe-EU ukuba intetho yokungathathi cala ngokwesini nayo sele iyinto eqhelekileyo. Ithetha ukuthini le nto ngokwenzekayo? Oku kuthetha ukuba ukuba awuvumelani noku ngenxa yokuqiniseka okuthile, oku kuwela phantsi kwebhokisi 'yokukhohlisa'. Ke ngoko wenza isicelo soko inokuhamba kunye kwiziko le-GGZ (inkampu yemfundo kwakhona). Kwaye iinkqubo ezinkulu zedatha zinokujonga ukuba unamathela kwisimo esitsha sokungathathi cala kwisini ngaphandle kokuqaphela.
Kwaye ke asikhange sithethe ngegama elikhethwe ngobuchule 'ukubandakanywa'. Ukuba ufunda amaxwebhu akwi-Intanethi, kubonakala ukuba oku kuchaphazela ikakhulu ukunyuswa okusebenzayo kweqela le-LGBTI, apho banokuthi, umzekelo, banikezwe kuqala kwiinkqubo zesicelo. Urhulumente wade wanikezela ngenkxaso-mali yokuqasha abantu basetyhini kunye neqela le-LGBTI. Jonga nje le ngcaciso yeNkxaso yokuNcedisa kwiCandelo lamaZiko okanye jonga umfanekiso ongezantsi.
Ngamafutshane: ukuba uyindoda eyahlukileyo, ushiye ngasemva. Ngapha koko, uya kuba ucalucalulo, kuba umqeshi ofuna abasebenzi ufumana inkxaso-mali yokuqasha nantoni na ngaphandle kwendoda eyahlukileyo. Igama 'ukubandakanywa' ngokwenyani lithetha 'ukubandakanywa' (likwabizwa ngokuba lucalucalulo); ukukhutshwa kunyango olukhethekileyo olusekwe kwinkxaso.
Ke oko kuziswa njengokwamkelwa kunye nokukhululwa kubangelwe kukungalungelelani kwabantu abathandanayo. Unxibelelwano nalo lonke umthetho oluqinisekisa ukuba nabani na ongavumelaniyo nemeko yengqondo unokuthunyelwa kwiziko lezempilo yengqondo (ngokunyanzelwa nangaphandle kokungenelela kwejaji okanye ugqirha wezengqondo, nge-WvGGZ, eqala nge-2020). Oku kunokuthi, umzekelo, kukhathaze izimvo ezahlukeneyo ngemozulu okanye izimvo ezahlukeneyo malunga nentetho yokungathathi cala ngokwesini. Ngaba kuvakala njani kuwe? Asisithethi ngokwenyani na? Asitsho sithetha ngamapolisa nje? Ngayiphi na imeko, amapolisa atyelela rhoqo izikolo (njengoko ubona kulo myalezo ungasentla). Qhela kuyo. Okanye thatha inyathelo, thenga incwadi yam kwaye uyihambise kangangoko kubo bonke abantwana ababekwa phantsi koxinzelelo:
Uluhlu lonxibelelwano lomthombo: Weatherchangedispatch.com, zngoku.com, europa.eu, dus-i.nl, dedijk.atlascollege.nl
Umbutho wokulwa nokungathathi hlangothi ngokwesini ukugcinwa kwesondo
Kutheni uMark Rutte engalindelanga ukuba avele kwi-closet ngenxa yobungqingili bakhe?
tags: bi, de, nxiba, kuluntu, I-homo, kubandakanya, ukubandakanywa, obesini, LHBTI, uthando, zimfusa, zimfusa, transgender, NgoLwesihlanu
13 Disemba 2019 kwi-04: 07
Inqaku eliphezulu kwakhona, Martin. Mna ngokwam ndibhale amaxesha aliqela kwi-2016 kunye ne-2017 malunga ne-'Phuli yeNguquko 'ecwangcisiweyo exhaswa ngasemva liqabane le-EU uGeorge Soros. Umbala 'wangoLwesine onombala' ngenxa yoko ubonakala ngathi awukho ndaweninye. Kwangoko besinayo inguquko kaPinki (2003, Georgia), iOrange (iUkraine, i2004), inguqu ka-Saffron (etyheli) eMyanmar (2007), i-Green green e-Iran (2009), i 'Grapes Revolution' (eluhlaza okwesibhakabhaka) eMoldova (2009), kunye "nokutshintsha kombala" eMakedoni (2016). Zonke ezi mvukelo, kubandakanya injongo ezayo eNtshona, ziye zafana uGeorge Soros kunye nee-NGOs ezininzi zehlabathi kunye nenkxaso ye-EU, zonke ezisebenzayo ukukhuthaza iyantlukwano kunye ne-transgender, imozulu kunye ne-ajenda yokufudukela kwabantu abaninzi.
Qaphela ukuba imibala yombala ilandelwa ukusuka phezulu ukuya ezantsi: i-pink / red, iorenji, tyheli, luhlaza, luhlaza, noblowu. Unokutsho kwakhona ukuba umbala ophuzi ngumdibaniso wombala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nobomvu, imibala yeflegi yaseMelika, kunye neblowu yeflegi ye-EU exutywe nomnxibelelanisi (/ Antifa / Ukupheliswa Ukupheliswa) ubomvu, okanye ukudityaniswa kwelungelo lesiko lezopolitiko. (Liberals, Christian Democrats) ezinokunxibelelana. Akukho mahluko ungako phakathi kwabo, ngokuqinisekileyo abukho kwiPalamente yaseYurophu. Umbala omfusa ngowombala oxubileyo wemibala yesintu yamakhwenkwe (luhlaza) namantombazana (apinki). Ufuna? Okanye ngaba zonke iinkcukacha zenziwe ngokwenyani?
Ukuba akukhange kube njalo, kuya kuba yinto eyenzeka ukuba kwingqungquthela ye-EU nge-12 ngoDisemba iKhansile yokuqala yabasetyhini yase-Austria- njengazo nje ezinye iinkokeli ze-EU ezingatshatanga kwaye ngaphandle kwabantwana-ngubani, njengo Mongameli weNkundla ePhakamileyo, wazisa umtshato wesini esinye e-Austria, kwavela ipakethi emsobo. U-Angela Merkel waye-orenji. Kwinkcazo-ntetho yeKhomishini yakhe, umongameli omtsha weEC u-Ursula von der Leyen wayenxibe iorenji kwaye wema phambi kwemvelaphi emfusa. Kodwa mhlawumbi le mibala ngoku yifashoni okanye into ethile.
Kwizikolo ezahlukeneyo kunye neeyunivesithi zaseMelika, abafundi kunye nabafundi sele kunyanzelekile ukuba bathathe inxaxheba 'kwimisebenzi ye-LGBTQ', efakwe kwimithombo yeendaba njengezenzo ezizenzekelayo 'zokwenyani' ngenene. Ke uhlobo lomanyano apho amaSoviet abanyanzela 'abachasi' 'noqhoqhoqho' amashumi eminyaka kwaye bazivalela kwigluggi ('iinkampu zokufunda ngokutsha'), kwaye apho amaNazi afaka amakhwenkwe amaJamani angama-10 ezigidi kwiqela likaHitler Jugend kwiminyaka engaphantsi kwe6, bahlanjwa ngokupheleleyo kwaye baqeqeshwa ukuba babe ngabalandeli abathobelayo-kanye njengoko kusenzeka kulutsha lwanamhlanje kwiziko lanamhlanje lokufumana ulwazi ekufuneka lipase ezikolo.
Yonke into ilandela phantse ngaphandle komthungo iskripthi seMarxist anarchist uSaul Alinsky, obefuna ekuhleni ukungathobeki nokungaphakathi kokuwa koluntu lwaseNtshona, kwaye wafundisa abalandeli bakhe ukuba 'baxoke, babe kwaye bakrebele' ukufezekisa le njongo. Kwincwadi yakhe ethi "Rules of Radicals" ubhale wathi: "Masingalibali ukwamkela isigqabantshintshi sokuqala kwimbali, intsomi nembali ... eyokuqala evukelayo kumyalelo omiselweyo kwaye yenza oko ngempumelelo. Ubukumkani bakhe: "Lusifa." Ke ngoko sifika kumyalelo weLuciferian wehlabathi ukuba ubhale ngawo encwadini yakho kunye namanqaku. Ubukumkani bakhe yile nto yokulinganisa intsholongwane esiphila kuyo.
13 Disemba 2019 kwi-10: 04
Enkosi ngongezo lwakho olubalulekileyo.
Ezo zibonakaliso zombala ngokwenene zonke zikhethwe ngentsingiselo.
13 Disemba 2019 kwi-10: 24
Jonga imvukelo enemibala ye-Gene Sharp (CIA) ethi kule minyaka idlulileyo isetyenziswe kuwo onke loo mazwe, eyona isandula ukubakho e-Ukraine (niyazazi apho uFrans Timmermans ngequbuliso wema kwi-Maiden Square).
Wawuyintoni umbala wologuquko kwakhona?
Ewe kwakhona Ukupheliswa Ukuvukelwa kuya kusebenza (kwaye ngeli xesha ngokuvulekileyo nangokuvumayo) indlela yokuguqula umbala enemibala yeGene.
13 Disemba 2019 kwi-10: 26
13 Disemba 2019 kwi-10: 34
Ngokumalunga nokusetyenziswa komkhosi wokunyanzelisa amanyathelo atshintsho lwemozulu ngomkhosi, bendibambe ikhonkco elingalunganga kwinqaku.
13 Disemba 2019 kwi-08: 24
ISIQINISEKISO SOKUVUNYELWA KWEEMVAVANYO ZONYAKA WOKUQALA WE-LGBTQ + ALTAR EBONISA IMITHETHO, I-LESBIANS NETRRLGERS kwi-GardEN OKANYE I-EDEN REPLACING ADAM NO EVE
13 Disemba 2019 kwi-09: 51
I-TimSchutte77 wabhala wathi:
13 Disemba 2019 kwi-12: 19
Kwaye ekuphela kwendlela yokubaleka esihogweni yedijithali ezayo nguYesu, kuba uXwilo lwawo onke amaKristu lusizi.
13 Disemba 2019 kwi-12: 28
Ndiyayiqonda indlela esabela ngayo, kodwa ndicebisa ukufunda incwadi yam. Ndikhule ndinoluvo lokuba ekuphela kwendlela yokubaleka iya kuba nguYesu, kodwa iluncedo kakhulu ukuphanda enye into. Ndenza oko encwadini. Ebambelele kwiimfundiso ezindala kwaye wavumela abantu ukuba bakholelwe kuzo, uthanda indlela yokungazi, "Oo kodwa sinaye uYesu kwaye uzakusingenisa ngaphambi kokuba ishiywe lihogo emhlabeni". Ndicacisa kwincwadi yam ukuba sisityholo esinye sobuju sobusi.
13 Disemba 2019 kwi-22: 19
Ndivumelana ngokupheleleyo noMartin. Nam, ndikholelwa ekubeni ukubaleka kwemilingo iminyaka. Kodwa loo nto iyodwa ayinakuxhomekeka kwisicatshulwa esisiseko (kunye nomxholo) webhayibhile ngokwayo. Kwaye ngaphandle kwesibakala sokuba uninzi lwamaKristu lungazange lwatshutshiswa kuyo yonke imbali, abo baseNtshona bayaqhubeka nokubambelela kule nkohliso, oku "kwamkelwa kwangaphambili," kuba bathetha ukuthi "zonke iingxaki," zihlala "ziyimbandezelo enkulu." ezikhankanyiweyo ziya kusinda.
AmaKhristu asakholelwa kule nto ahlala enolwazi oluncinci lwencwadi yakhe engcwele, kuba kwiTestamente eNtsha kukho izicatshulwa ze37 malunga nengcinezelo, nakwiimeko ze36 ukuba ingcinezelo inxulumene namakholwa. Ngapha koko, iSityhilelo 1 ngokoqobo ichaza ukuba imbandezelo (enkulu) yayisele iqalile. Ngokwembono yebhayibhile, ingcinezelo yeyamakholwa, njengoko ifundwa ngokoqobo kwizicatshulwa ezahlukeneyo. Kuyachazwa nokuba luphawu olusisiseko lokholo lwenene.
Ukuba uphanda ngakumbi kwaye ucinga, uyakufumanisa ukuba inyathelo ngenyathelo elininzi koko ukufundiswa ezicaweni nakwabashumayeli, kwaye ngokuqinisekileyo 'ukubandakanywa' kwengqikelelo yexesha lesiphelo, kusekwe kwi-quicksand nabantu abakwinkqubo yenkolo emiselweyo. (eyoyika) inkqubo. AmaKristu ahlala exelela iintsomi ezifanayo ezamkela ukuba 'ziyinyani', kodwa zona-ngokulula: kwakhona, ngokusekelwe kwibhayibhile yazo - ziyaliwe.
Ngendlela, kungabakho uhlobo 'lokurekhoda', kuba itekhnoloji ngoku ikude kangangokuba into enjalo inokubekwa ngendlela engacacanga kubomi bokwenyani. Kuthekani ukuba ukurekhoda bubuxoki, "isiciko se-honeypot" njengokuba uMartin ubhala, ehenda abantu ukuba bavalelwe entolongweni nangokunzulu abangenakuze babalekele kuyo?
Yiyo loo nto ndicebisa amakholwa ukuba afunde incwadi kaMartin. Akunyanzelekanga ukuba uvumelane nayo yonke into kwangoko, izinto ezininzi ziya kubangela uhlobo oluthile lokuothusa, kodwa umda wento ayibhalayo ubaluleke kakhulu ukungahoyi, kuba ubungqina boku buyabonakala macala onke kuthi nasebomini babaninzi yi. Yile nto yokuba eli lizwe (/ ukumbumbuluza) lilawulwa nguLusifa, olawula neenkolo eziphambili, zidlala ngokuchaseneyo kwaye zishiya amawaka ezigidi zabalandeli ebumnyameni malunga nokuba ngubani kanye okhupha imitya, kwaye iyintoni eyona njongo yiyo yonke loo nto.
IWineland Schildmeijer wabhala wathi:
22 Disemba 2019 kwi-22: 49
UWilliam Cooper wayesebenza koku ukususela nge-8: 30
13 Disemba 2019 kwi-13: 11
Umatshini wokusasaza uqhuba ngesantya esipheleleyo
13 Disemba 2019 kwi-14: 05
... umatshini wokusasaza weTavistock ngokuhlawula iindleko zepremiyamu kunye nerhafu, oko kukuthi.
"Unyango oluninzi oluqinisekisa isini luhlawulwa yi-inshurensi esisiseko."
"Kwisizukulwana esilandelayo ndiyakholelwa ukuba iinkokeli zehlabathi ziya kufumanisa ukuba imeko yeentsana kunye ne-narco-hypnosis isebenza kakuhle, njengezixhobo zikarhulumente, kuneeklabhu kunye neentolongo, kwaye ukuba umnqweno wamandla ungoneliseka ngokupheleleyo ngokucebisa abantu ukuba bangene bathande inkonzo yabo njengokubetha nokubetha ukuze bathobele. ”
-UAldous Huxley, ileta eya kuGeorge Orwell
13 Disemba 2019 kwi-14: 47
Logama ukuba ingxaki yokwenene ayicombululwa ngamandla, siya kuqhubeka nokuhlalutya.
14 Disemba 2019 kwi-11: 37
Ndiyaqonda ukuba amafama enze umjikelo weyure izolo. Ngemvume 'yabasemagunyeni' leyo., Kufuneka ukuba abafana bachukunyiswe. Benze kakuhle abalimi.
14 Disemba 2019 kwi-14: 07
Ewe konke oku akusebenzi ... yonke into ibiyelwe
Into kuphela encedayo kukuvula iingcango zezitali kunye nocingo lwamadlelo, kodwa ewe ezo nkomo zilungileyo zihamba nje zibuyele emgqondweni ukuze kungabikho nto.
Ewe, ke thumela imithwalo yeetrektara ezele ziinkomo kwintendelezo. Kungakuhle ukuba bekukho amawaka alishumi eenkomo ahamba ngeHague.
Akukho mthetho unqanda iinkomo ukuba zingaqhankqalazi, ke akufuneki ufake isicelo semvume.
Icebiso: ukuba utshiza itrektara kuyo yonke imibala yomnyama, amapolisa awanakukubamba (ngaphandle kobumbano).
14 Disemba 2019 kwi-16: 03
Ewe, yonke into ibiyelwe. Ewe, ezo zeenkomo ngumbono odlalwayo. Kodwa abalimi, iibhola, udders, abanayo loo nto, ngokoko kusemthethweni konke konke. Andizukucebisa amakhwenkwe apha.
Ndivile ukuba abasebenzi beTata Steel bafuna ukugwayimba. Ewe ndinomdla wokwazi, ukuba bambe iiyure ezimbalwa kakhulu. Kuba ukubetha yinto ebizwa ngokuba ilungile, kodwa awunakulisebenzisa eli lungelo. Iijaji zabafana ziya kuyikhathalela loo nto. Kuyamangaza ukuba i-Amnesty International kunye neLungelo lamaLungelo oLuntu zihlala zimele amalungelo oluntu phesheya kodwa apha. Inokwenzeka njani loo nto? Kufuneka senze into eqhelekileyo, ngoko ke sichitha iyure sinesicatshulwa, asiwusifumani kwi-Tata Steel, singayenza nje, sidlale. Ke umanyano alufanelanga ukuba nexhala malunga nengxowa-mali yesiteleka. Ukuba ngokwenene kukho uqhankqalazo, iya kuba lilize kwiintsuku ezimbalwa kunye nabasebenzi ukuba ngokwenene banesitima. Kwaye ucinga ukuba ujoyina nje ibhodi yomanyano lwabasebenzi? Andiyenzi. Bonke bayazana kwaye banxibelelana ngaphambi kokuba BABENZELWE ISICWANGCISO sabo. Ngaba imanyano yombutho ingasebenza nzima kwaye ifumane amanye amalungu amatsha. Ekugqibeleni, BONKE BONKE BAYAQHATYELWA eNetherlands. Kodwa ewe ummi olungileyo ucinga ukuba kulungile kwakhona kuba efuna ukuqiniseka, ihlawulelwe yonke into. Sukuxoka hayi.xela inyani! Hayi, andiyiphanyeli imihlobiso yeKrisimesi namhlanje. Sukuthatha nomphandle weKrisimesi. Urhwebo kuphela kwimidla ...
« Umcebisi wezopolitiko uphakamisa ukwakha iinkampu zokufunda kwakhona!
Ngaba inzuzo kaBoris Johnson ngumanduleli weNexit? Uqikelelo lwam eYurophu »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.469.970
SalmonInClick op UDavid Icke eLondon yangempela yevidiyo: Ngaba i-Icke yeyokwenyani okanye yeyokwenyani okanye ngaba inyani idityaniswe nomgibe we-booby?